Ethiopian unwarranted interference in Somali�s internal affairs
Idaajaa oo inoo soo koobaya waraaqdii uu C/risaaq x.xuseen u direy Mile Zinawiga Ethopia
Hordhac: Dabayaaqadii bishii May ee sannadkan 2002da ayaa bar ka mid ah baraha internetka ee ay soomaalidu wax isugu tebiso waxa la iiga soo saaray dhanbaal 8 bog ka kooban oo uu qoray siyaasiga soomaaliyeed ee ruugcaddaaga ah; Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Haddiiba aniga oo aan in badan ka akhriyin ayay sadarradii hore i soo jiiteen. Dabadeedna bogba bog buu ii dhiibay, goor aan dhammeeyeyna ma aan ogeyn. Mar kale iyo mar saddexaad ayaan akhris ugu noqday, aniga oo faqrad-faqrad u dhadhansanaaya, aadna i mooddid arday kor ka qaybaaya cashar goor dhow loo dhegeysan doono.
Faafin: Laascaanood.com | Nov 18, 2002
La soco taxanaha wararka